Xigmer Lunar, ihe niile ịchọrọ na smartwatch maka euro 25 | Gam akporosis
Xigmer Lunar X01, nyocha, arụmọrụ na ọnụahịa
Ọ bụrụ na ị nọgide na-eguzogide ihe ọ bụla kpatara ya buru usoro a wearable, taa anyị na-ewetara gị otu nhọrọ nwere ike inyere gị aka ịkwụsị iche banyere ya, ndị Ememme ọnwa Xigmer X01. Smartwatches anọnyerela anyị ọtụtụ afọ ma na afọ gara aga ha na-agwụ iji gosipụta onwe ha dịka ngwa ngwa dị mkpa. Ọ dị ole na ole na ole mobile ọrụ ndị ka na-enweghị a smartwatch.
Oge a anyị anwalela Xigmer Lunar smartwatch maka ụbọchị ole na ole na anyị ga-agwa gị n'ụzọ zuru ezu ihe ọ nwere ike inye anyị. Anyị maara na inye onyinye dị ukwuu nke ụdị ngwa a, ọ na-esiwanye ike ikpebi onye ga-enwe ike izute ọnọdụ pere mpe na-enweghị ike agwụ ego anyị.
1 Lunar Xigmer, dị nnọọ ihe ị chọrọ
3 Nzube na ụdị nke Xigmer Lunar
4 Ihe niile Lunar Xigmer nwere ike inye gị
5 Nnwere onwe na njikọta
6 Mpempe akwụkwọ nka na ụzụ
7 Uru na ọghọm nke ọnwa Xigmer
Lunar Xigmer, dị nnọọ ihe ị chọrọ
Mgbe ọ na-abịa n'ịchọta smartwatch nke jikọtara ihe onye ọ bụla na-achọ; ezi atụmatụ na ezi imewe, ọ dị mkpa ịmata ihe mmefu ego anyị nwere bụ. Ya mere, na-ewere na Lunar Xigmer bụ elekere dị ọnụ ala, Nke a bụ nwee ike ibi ndụ kwekọrọ n'ihe anyị ga-achọ ka ntinye smartwatch.
Mana ọ bụghị naanị na ọ nwere ike imezu atụmanya ndị anyị nwere ike ịnwe elekere dị ala, ọ ga-emekwaju ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ngwaọrụ ọzọ dị oke ọnụ. Na-enweghị nkwado, mana ya na njirimara niile ị "chọrọ". Obi abụọ adịghị ya, nhọrọ na-adọrọ mmasị maka ndị na-ekpebi uwe na-enweghị ike iji ego emefu ego.
Lunar Xigmer na-enye a kpochapụwo imewe na gburugburu alkpọ oku na adighi-achoputa ya anya. Ma n'otu oge ahụ, na-arịọ ndị na-enweghị mmasị na ngwaọrụ ọkụ. Ọ bụrụ na ihe ị na-eche bụ naanị ihe smartwatch nwere ike ịnye gị, yana ịchọghị imefu ego, nweta Lunar Xigmer ugbu a maka naanị n'okpuru 25 euro.
Anyị na-achọkarị ịhụ ihe dị n'ime igbe nke ngwaọrụ niile anyị nwere obi ụtọ ịnwale. Mpempe akwụkwọ nke smartwatches anaghị enyekarị ihe ịtụnanya ọ bụla, nke a bụ otu ikpe. Anyị ahụwo n'oge ụfọdụ na ndị nrụpụta gụnyere eriri ụdọ, nke agba ọzọ, mana nke a abụghị ikpe ọ bụla.
Anyi nwere nke anyi nche, nke na-egosi na ya eriri silicone tinye. Na mgbakwunye, anyị nwere chaja nja, nke nwere kpokọtara magneti kpochapụwo maka nke dabara adaba. Ma ọ dịghị ihe ọzọ, ma e wezụga obere ndu eji otu n'ime ndị na ọ dịghị onye na-agụ.
Nzube na ụdị nke Xigmer Lunar
Ihe dị iche na smartwatches ndị ọzọ na nke mbụ bụ ịrụ ụka adịghị ya usoro nke okirikiri gị. E nwere dị ka a n'ozuzu na-achị, ma e wezụga n'ihi na a kapịrị ọnụ ma ọ bụ ihe ọhụrụ nlereanya, okirikiri ese ma ọ bụ square ese. Lunar Xigmer bụ otu n’ime ndị mbụ. Elekere nwere okirikiri nke na-enye anya ihe na-adabaghị adaba ma na ọ na-amasị maka ire ụtọ nke ahịrị ya.
La isi awọ alloy pịa o doro anya na ya na agba ojii nke matt ya. Ọ na-ejikọta n'ụzọ zuru oke gị ihuenyo nwere diagonal nke 1,3 sentimita, na a N'elu-nkezi mkpebi nke 360 ​​x 360 pikselụ, nke na TFT nke nha a na-enye ezigbo ahụmịhe onye ọrụ.
E mere ka mkpebi ahụ dị mma na idoanya nke agba ya, kedu ka anyị nwere ike isi gụọ ọkwa, yana ọkachasị na ihuenyo ihie nke a na-agụta ọbụna na ọnọdụ ìhè anyanwụ n'èzí. Obi abụọ adịghị ya na otu isi na-akwado nke a nche na ị pụrụ ịzụta sonso 25 euro.
na Aka nri site na Lunar Xigmer anyị na-ahụ bọtịnụ aka, nke ilere ya anya na-echetara anyị okpueze nke oge ochie. Nke a button nwere on / anya ọrụ ma laghachi na akụkụ ọ bụla nke menu na ihuenyo mbụ. Ọ nwere ezigbo pulsation na ezi naghachi.
Ugbu a Ememme ọnwa Xigmer X01 ọ nwere ike ịbụ nke gị naanị euro 25
N'ime ya azụ anyị hụrụ nyochaa obi ya na ihe mmetụta abuo nke na-enye ogugu n’oge a. Ma abụọ atụdo na magnet nke ahụ ga-adaba nke ọma na eriri batrị batrị.
La leash, dị ka ọ dị na mbụ, bụ nke silicone na aka o yiri ka ọ dị mma. Agba ojii ya dabara nke ọma na ụda isi awọ nke ihu nche. Anyị nwere ike ịgbanwe ya ekele mmeghe na mmechi taabụ. Ọ bụ ezie na n'okwu a anyị nwere naanị otu.
Ihe niile Lunar Xigmer nwere ike inye gị
E nwere ọtụtụ atụmanya anyị nwere mgbe anyị ga-azụ ihe eji eyi. Anyi aghaghi iburu n'uche na onu ahia dika iwu, o ruru ka ha rite uru ha. Ya mere, mgbe anyị hụrụ a ngwaọrụ dị ọnụ ala ma nwee ike ịchụ ọtụtụ anyị kwesịrị iburu ya n'uche.
N'ihe banyere Xigmer Lunar, anyị na-ahụ ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke arụmọrụ. E wezụga nke ahụ ozi ozi na anyị nwere ike hazie nụrụ ụtọ, anyị nwekwara ike inweta nha atụ a tụkwasịrị obi nke obi anyị. Anyị nwekwara ohere nke nyochaa mmega ahụ anyị, gụọ usoro kwa ụbọchị na calorie ọkụ.
Anyị nwere dị mfe interface iji ghọta ma malite iji ozugbo. Site na iji mkpịsị aka gị mee ihe dabere na ntụziaka anyị nwere ike ịnweta menus dị iche iche. Anyị nwere ike inwe a ezigbo mmekọrịta nke elekere data na anyị ama. Mkparịta ụka ahụ dị ezigbo mma ebe ọ bụ na site na elekere n'onwe ya, anyị nwere ike ịhazi ọkwa dị iche iche, mkpu ma ọ bụ ịdọ aka ná ntị.
Ekele maka ngwa Ekike, tinye njikọ, anyị nwere ike ịnwe n'oge ahụ data nke smartwatch na-edebanye aha na ekwentị anyị. Anyị ga-enweta tNiile data na-amasị anyị na mbụ hazi, yana ndekọ zuru ezu nke egwuregwu anyị. Ọzọkwa Anyị nwere ike ijikwa mkpu, Ngwa anyị na-ahọrọ ma ọ bụ hazie ịdọ aka ná ntị maka ibi ndụ na-anọkarị otu ebe.
Nnwere onwe na njikọta
Obi abụọ adịghị ya nnwere onwe na-aghọkarị otu isi ihe dị mkpa mgbe ị na-ekpebi otu smartwatch ma ọ bụ ọzọ. Na nke a, na na Xigmer Lunar anyị na-ahụ ụgwọ batrị nke 250 mAh. Ihe dị na nkezi nke ngwaọrụ nke njirimara ndị yiri ya. Ihe ngosi ga-eso gị gaa oge niile, na Ememme ọnwa Xigmer X01 bụ ihe ị chọrọ.
Mana maka onye ọrụ njedebe, ihe dị ezigbo mkpa bụ nnwere onwe nke ụgwọ batrị a nwere ike ịchụ. Anyị na-agụta, sDabere na onye nrụpụta nwere nnwere onwe nke ga-eru ụbọchị iri atọ nke ojiji. Ọbụlagodi na anyị ga-dokwuo anya na nke a bụ otú na di ntakiri ojiji, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ezumike, nke elekere. Mana ọ bụrụ na anyị chọrọ smartwatch ọ bụ inye ya ihe niile enwere ike iji mee ya, na nke a nnwere onwe ha dị naanị ọkara, ihe dị ka ụbọchị iri na ise nke ojiji, nke adighikwa nma.
Maka ịgba ụgwọ, dịka anyị kwurula, anyị nwere eriri na njedebe nke anyị na-ahụ ntụtụ magnetized. Njikọ ahụ zuru oke ma buru ibu ozugbo. Otu isi ihe dị mma bụ na Anyị nwere ike ịnwe 100% nke ụgwọ nke batrị ion lithium a naanị otu awa na ọkara.
Na njikọ Njikọ anyị na-ahụ protocol nke Bluetooth O yiri ka ọ dị ntakịrị n'okpuru uru ndị ọzọ. N'agbanyeghị, yana njikọta bluetooth 4.0 elekere anaghị efunahụ njikọ na ngwaọrụ n'oge ọ bụla ma na-enye ezigbo ihe iji ya eme ihe mgbe niile.
Ọzọ nke buts na anyị nwere ike tinye bụ na o nweghi GPS, ma obu NFC. Abụọ n'ime atụmatụ ndị kachasị chọọ na-enweghị mgbagha na akwa akwa. Ma otu oge ọzọ anyi kwesiri ima maka onu ahia nke di na ya ahumachi. Njirimara "Top" nke anyi nwere ike icho na akwa ejiji nke na-eri ihe kariri okpukpu iri onu ahia ha. Anyị nwere ike ịchọ ntakịrị karịa site na smartwatch nke anyị ga-akwụ obere euro 25.
Nlereanya Ememme ọnwa01
Ihuenyo 1.3 sentimita
Njikọ Bluetooth 4.0
Mkpebi 360 x 360
Nguzogide Asambodo IP68
Batrị 250 mAh
Onwe ya ruo ụbọchị 30
Oge nfe Awa 1.5
Akụkụ 45.3 x 11.4 mm
Ibu ibu 55 g
Ahịa 25.10 €
Linkzụta njikọ Ememme ọnwa Xigmer X01
Uru na ọghọm nke ọnwa Xigmer
La ihuenyo guzo apụ maka ya tamaño ukwuu karịa asọmpi na a mkpebi dị mma.
Imebe nwere uche ma mara mma, zuru oke maka ndị chọrọ ịnwe teknụzụ kachasị ọhụrụ mana na-enweghị adọta uche.
El ego Ọ na-aghọ nnọọ akụ na ụba n'ihi ihe ọ nwere ike inye anyị.
Ngosipụta na mkpebi
Mba Ọ nwere modul GPS, ihe ezi uche dị na ya na ọnụahịa ya.
Anyị achọpụtabeghịkwa NFC, ihe kpatara ya bu otu, onu ahia.
Ememme ọnwa Xigmer X01
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Xigmer Lunar X01, nyocha, arụmọrụ na ọnụahịa
Egwuregwu egwuregwu kacha mma kacha mma maka gam akporo